शिक्षकले अझै दलको झोला बोक्न ?
पञ्चायत फाल्नुथियो, शिक्षक र कर्मचारीले राजनीति गरे । बहुदल आयो, शिक्षक र कर्मचारी राजनीतिमा नै लिप्त भइरहे । राजतन्त्र फाल्नु थियो, शिक्षक र कर्मचारीले गर्नुसम्मको विद्रोही भूमिका खेलेकै हुन् । जनआन्दोलनमा शिक्षक, कर्मचारीहरुले अग्रपंक्तिमा उभिएर जनआन्दोलनलाई साथ दिए त्यसमाथि माओवादी मिसिएपछि त शिक्षक कर्मचारीले नै जनआन्दोलनलाई सफल पार्न सघाए ।
यो २०६३ साल वैशाख ११ को कुरा हो । जनआन्दोलन सफल भयो, जनविद्रोह लोकतन्त्रमय बन्न मञ्जुर गरेर सहभागी भयो ।
त्यसपछि संविधानसभाको अध्याय सुरु भएको हो । हाम्रा परिवर्तनका अगुवा बनेका राजनीतिक पार्टीहरुलाई संविधान लेख्न र जारी गर्न २०७२ साल असोज ३ गतेसम्मको समय लाग्यो । ठिकै छ, त्यसपछि स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । अव आन्दोलनको होइन, सहमति र राजनीतिक सहमति र सहकार्यको जरुरी छ । जनादेशअनुसार राज्य चलाउने जिम्मेवारी वाममोर्चाले पाइसकेको यो स्थितिमा फेरि पनि कर्मचारी र शिक्षकहरुले मजदुरले झैं ट्ेरड युनियन किन चलाइरहेछन् ?
चाहिएको छ, शिक्षा र सुशासन, शिक्षा र सुशासन दिने जिम्मेवारी शिक्षक र कर्मचारीको हो । अव त पार्टीको झोला बिसाएर जनताले तिरेको करको तलव भत्ता खाने शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नैतिक दायित्व स्वीकार गर्नुपर्‍यो । त्यसो त पहिले पनि जागीर खाएर राजनीतिमा होमिनु हुने थिएन, अनैतिक नै थियो । अव पनि उनीहरु राजनीतिक ट्याग झुण्ड्याएर शिक्षक र कर्मचारीले गर्नुपर्ने मुख्य काम गर्दैनन् भने त्यस्ता अनैतिकहरुबाट देशले के आशा गर्ने ?
संविधानको पालना गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारको टुल्स भनेका शिक्षक र कर्मचारी नै हुन्, जसले अलिकति तलमाथि गरिदिदा संविधान र कानुनी शासनको मर्म बिथोलिन जाने गर्दछ । यसकारण पनि लोकतन्त्रका लागि लडेका हौं भन्ने कर्मचारी र शिक्षकले जिम्मेवारीका साथ आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न जरुरी देखिन्छ । तर यी दुबै बर्ग आज पनि राजनीतिक पार्टीको झोला बोकिरहेका देखिन्छन् र पार्टीको फुइँ लगाएर काम नगर्ने र लाभ बढी लिनेतिर यिनको ध्यान गइरहेको छ । जुन सरासर गलत प्रवृत्ति हो, देशबिगार्ने प्रवृत्ति हो ।
यहाँसम्म कि स्कूले शिक्षकमात्र होइन, विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुसमेत राजनीतिक पार्टिका आडमा जागीर खाइरहेका छन् । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारीले जागीरभन्दा जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने हो, किनकि समाजलाई आँखा देखाउने, सरकारलाई जनमैत्री बनाउने बर्ग हुन् यी, यही बर्ग दिशाहीन हुन्छ भने सरकारले कसरी शान्ति, समुन्नति र सुशासन दिनसक्छ ? अहिले जे भइरहेको छ, गलत भइरहेछ र यो गलतलाई सच्याउने जिम्मेवारी पार्टीहरुको नै हो ।